I-Matrix: UMartin Vrijland
Ngubani okhumbula iziganeko ezivela kwi-trilogy movie 'The Matrix' esuka kwi-1999 apho nabani na abadlulayo bangashintsha ngokukhawuleza ibe 'igosa'? Ukususela mhla ndiqalise ukubhala, umkhankaso omkhulu uye waqalisa ukungenza umnyama. Oku kubonakala kumaphepha onke avule umqumbo ngam and [...]
I-person-biocomputer kunye ne-nano-avatars i-Google ifuna ukwakha
Kufakwe kuyo PHILOSOPHICAL	by UMartin Vrijland	21 Aprili 2015	• 34 Comments
Abafundi abathembekileyo be-martinvrijland.nl ngoku baqhelana negama likaRay Kurzweil. URay ngu-1 wabantu abaphezulu beGoogle, abandakanyekayo kwiprojekthi ye-Google-X. URay Kurzweil uchaza ezininzi kwiincwadana zakhe kwi-YouTube ukuba zeziphi izicwangciso zeGoogle. Ndiye ndikho ngezihlandlo eziliqela [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 114.317
Ikhamera 2 op Ixesha lokuma ngaphambi kwishelufa lingenanto
Ikhamera 2 op Inkqubo yesizwe yokuthintela: "fumana uvavanyo lweeveki ezingama-22!" .. umntwana wakho uya kwenziwa i-hermaphrodite
UMartin Vrijland op Inkqubo yesizwe yokuthintela: "fumana uvavanyo lweeveki ezingama-22!" .. umntwana wakho uya kwenziwa i-hermaphrodite
NguJan Holland op Iibhombu zaseRussia zitshabalalisa iinqwelomoya zaseTurkey, eSyria